Dhangadhi Khabar | सन्दर्भ : मातातिर्थ औंसी
साष्टाङ्ग दण्डवत ढोग !
आज आमाको मुख हेर्ने दिन । "आमा" भन्ने शब्दको अर्थ हर कोहिलाई थाहा छ । सुखमा अनि रमाइलो गर्दा यादै नआउने कुनै बिपत्ति समस्या आइलाग्ने बित्तिकै सबैको मुखमा झुन्डिने शब्द हो -"आमा" ।
आमा म हजुरलाई कसरी परिभाषित गरौ हजुरको कसरी बर्णन गरौ ? मेरि आमा...! नौ नौ महिना आफ्नो पेटमा राखी यो सुन्दर संसार देखाउनु भयो । छोरा बिरामी पर्छ भनेर आफुले चिल्लो पिरो ( कुबत ) बार्नुभयो । जबसम्म म खाना खाने भएको थिएन दिनभर मेलापात ,गोठालो जादा पनि काखमा म पिठ्युँमा घाँस दाउराको भारी हुन्थ्यो ।
आमा हजुरले कहिल्यै मीठो खाना खोज्नुभएन,हामी सन्तानको दुख भोक सहन नसक्ने एक मात्र भगवान हो आमा हजुर । हामी मज्जाले खाना खान्थ्यौ अन्त्यमा एक दुई टुक्रा रोटीको बचे पछि खाने नत्र नखाने गर्नुहुन्थ्यो हजुर । कैयौं दिन भोकै बस्नु पनि परेको छ हजुरले । हामी भने दिनमा ४/५ चोटि खाने तर अहँ आमा हजुरलाई कहिले चाहिएन है यस्तो ? आमा हजुर अझै पनि म जन्मदाका पुराना लुगा लगाउनुहुन्छ है ?
कहिल्यै नयाँ लुगा खोज्नुभएन है? अलिकति भएको पैसा कहिले कापी त कहिले कलम किन्न ठिक्क है छोरालाई ?
अब त हजुरका छोरा जवान भैसके तर आमा हजुरका दुख एकरत्ती पनि कम भएनन् छोराले बिहे गरेपछी सुख पाउने हजुरको सपना केवल सपना मात्र भयो । आजभोलि छोराहरु हजुरको एक कुरा पनि सुन्न चाहदैनन् ।
आमा म पढ्नको लागि अछाम बाट धनगढी आएको झन्डै ३ बर्ष भयो । मैले हजुरलाइ एक दिनपनी फोन गर्न सकिन किनकि मलाई समय नै छैन । कहिले कुनै कार्यक्रम हुन्छ कहिले प्रेमीकालाई फोन गर्न ठिक्क । तर हजुरले कम्तीमा हप्ताको ३ दिन फोन गरेर सोध्नुहुन्छ "छोरा कस्तो छ तिम्लाइ ? हिजो सपना देख्याथे , खाना समय मै खानु । खर्च कति छ ? अस्ति मैले पठाको घिउ र मह सकियो कि नाइ ?"
अहिलेका युवा साथीहरूलाई नैतिक शिक्षाको अभाव भएको छ । युवाहरू आफ्नो धर्म बिर्सन लागिसके । आफ्नो मुल्य मान्यता बिर्सन लागिसके त्यसैले त अहिले वृद्ध आश्रम बनाउनुपरेको हो । यसमा सरकारी निकायबाट नै रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । हरेक बिधालय तहमा नै नैतिक शिक्षा राखियोस । युवाहरुलाइ योग्यता क्षमता अनुसारको रोजगारी दिइयोस्,अनि कुनै पनि छोराले आफ्नो बुढा आमाबुबालाई वृद्ध आश्रम लग्नुपर्ने छैन ।
लेखक : भरत रावल
शनिबार २१, बैशाख २०७६ ०९:२६ मा प्रकाशित
निकै भयो एउटा प्रश्नले दिमागमा डेरा जमाएर बसेको
नाङ्गो खुट्टा हिडिन्थ्यो, यी आज कार छ के गर्छौ
मुर्झाउन थालेछन सपनाहरू, एक एक गरेर
"गायन क्षेत्रमा चम्कीदै सुदूरपश्चिमबाट उदाएकी रेखा"